Xaaladda magaalada Garoowe oo kacsan iyo ciidamo la wareegay xarunta baarlamaanka (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaaladda magaalada Garoowe oo kacsan iyo ciidamo la wareegay xarunta baarlamaanka (SAWIRO)
Wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay haatan tahay mid aad u kacsan kadib marki ciidamo gadoodsan ay maanta la wareegeen xarunta baarlamaanka maamulka Puntland ee ku taalla magaaladaas.
Ciidamadaan gadoodsan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa la sheegayaa inay ka yimaadeen dhinaca magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxayna ka cabanayaan mushaar la’aan, iyagoona arrinkaasi ku eedeeyey maamulka madaxweyne Gaas.
Ciidankaasi ayaa diiday in gebi ahaan la galo ama laga baxo xarunta baarlamaanka maamulka Puntland, iyadoona xaaladda magaalada Garoowe ay maanta tahay mid kacsan.
In ka badan 10 xildhibaan oo xilligan ku dhex sugan xarunta baarlamaanka ayaa la sheegay inay ku xayiran yihiin xarunta baarlamaanka ee maamulka Puntland.
Warar hordhac ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in isimadda Puntland ay haatan halkaasi ka wadaan dadaalo ay ku doonayaab in ciidamada gadoodsan ay uga saaraan xarunta baarlamaanka, waxaana ciidankaasi laga codsaday inay xerooyinkooda dib ugu laabtaan, islamarkaana wixii cabasho ah halkaasi lagu xalin doonno.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii u horeeysay ee ay gadood sameeyaan ciidamada Puntland, iyadoona tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweyne Gaas, waxaa joogto noqotay gadoodka ay sameeynayaan ciidamada ka cabanaya mushaar la’aan oo marba la wareegaya xarumo muhiim ah.